#1 iOS Data Recovery - Weghachite Ngwaọrụ iOS ehichapụ / echefuola data na ntụsara ahụ
Iweghachite DataKit iOS
Xwa data #1 Data Recovery nke iPhone, iPad na iPod Touch.
Naghachi foto ehichapụ / ehichapụ, vidiyo, kọntaktị, oku ndekọ, SMS, iMessages, ndetu, Data Data na ndị ọzọ.
Nghachite WhatsApp / Kikpịara WhatsApp / Kik / Line / Viber / Facebook Messenger Ozi na data.
Naghachi data echefuru / ehichapụla site na Ngwaọrụ iOS, Njikwa ndabere iTunes na iCloud ndabere.
Idozi ọtụtụ njehie iOS na-enweghị Loss Data.
Nkwado ndị niile Ngwaọrụ iOS ụdị.
Dakọtara na iOS 12 ma soro ụdị iTunes kacha ọhụrụ rụọ ọrụ.
Free Download Free Download Imeri Download Mac Download Nweta nnwale efu site na Email maka nbudata na kọmputa
Ihe ndị mere gị iPhone / iPad Data furu efu
Iweghachite data iOS nwere ike iweghachi data n'ọtụtụ ọnọdụ
Ọnọdụ ndị ka sie ike:
Ngwaọrụ rapaara na azaghị
Jailbreak ma ọ bụ ROM na-egbu maramara
Enweghị ike ịmekọrịta ndabere
More atụmatụ & aghụghọ ị na-eleghị anya ị na-achọ…
Banyere Data Iweghachite!
Ngwá ọrụ iOS zuru ezu bụ naanị ihe ị ga - eji na-agba ekwentị gị na 100%
Naghachi data site na ekwentị
Nyefee data n'etiti iOS, Android na kọmputa
Idozi nsogbu dị iche iche gbasara sistemụ iOS
Ichicha data site na ngwaọrụ a na-agbanwe agbanwe
Detuo data site na ekwentị n'otu ekwentị
Idogharia ekwentị na dogharia ekwentị gi
Wepu ihuenyo mkpọchi ekwentị gị
Enyo, detuo ihuenyo ngwaọrụ iOS gị na PC
Nweta iOS Data Recovery Ugbu a Nweta Mac iOS Data Recovery Ugbu a Nweta ya Ugbu a Nweta ya Ugbu a Nweta nnwale efu site na Email maka nbudata na kọmputa
Nzọụkwụ 3 iji nwetaghachi data iOS furu efu, Dị mfe ma kwụ ọtọ.
Nzọụkwụ 1: Ẹkedori ma jikọta ngwaọrụ gị
Nzọụkwụ 2: Nyochaa Lost Lost
Nzọụkwụ 3: Legharia ma nwetakwa data gị
Kedu ihe ị ga - eweghachite site na iji iOS Data Recovery?
Naghachi fọrọ nke nta ụdị faịlụ niile site na ngwaọrụ iOS gị.
* Isi data
* Nlekọta Mmekọrịta
* Ejiji kwa ụbọchị
Ozi & Mgbakwụnye
Ibe akwukwo Safari
WhatsApp & Mgbakwụnye
Ngwa Akwụkwọ *
Photo iyi *
Viber & Mgbakwụnye
Kik & Mgbakwụnye
Ọbá akwụkwọ foto
Ndi ana-akpo Echefuola data na * dị n’elu nwere ike ịnweghachi na iTunes / iCloud Ndabere faịlụ.
Ozi olu *
Ihe edeturu na Mgbakwunye
Nwaa Nwaa Nwaa Nwaa Nweta nnwale efu site na Email maka nbudata na kọmputa
iPhone usoro: iPhone 11 (Pro), iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 (gbakwunyere), iPhone 7 (gbakwunyere), iPhone SE, iPhone 6s (gbakwunyere), iPhone 6 (gbakwunye), iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 5, wdg.
Egwuregwu iPad: iPad Pro, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad 4, wdg.
iPod usoro: iPod metụ 6th gen., iPod aka 5th gen., iPod metụ 4th gen.
Olee otú iji naghachi furu efu iPhone Data na iOS Data Iweghachite
Etu esi edozi iPhone na-emegharị
Olee otú iji naghachi-ehichapụ ozi WhatsApp na iPhone
Etu esi eweghachi iPad na Ntọala Fri na-enweghị Paswọdu
Otu esi eweghachi kọntaktsị na iPhone / gam akporo ekwentị
Olee otu m si eweghachi iPhone si iTunes ndabere na iCloud ndabere
Otu esi eweghachi ozi ederede ehichapụ na iPhone
Tozọ isi nwetaghachi foto ndị ehichapụ iPhone
Teknụzụ mgbake data dị elu
Gbasoo teknụzụ mgbake kachasị elu iji hụ na ị kacha, kachasị mfe ma dị nchebe iji nwetaghachi data furu efu gị.
Nnukwu arụ ọrụ
Karịa 6,800,000 + Ndị ọrụ hụrụ iOS Data Iweghachite & Will Ga-eme
Nke a na-enye aka! Daalụ nke ukwuu! N'ihi na ọganihu mbufe m anaghị enwe ihe ịga nke ọma mgbe niile site na iji Nyefee Foto ka m wee chọọ ndị ọzọ na nke a bụ ihe kachasị mma!
Iji weghachi iPhone na iTunes dị oke mfe, Ma ọ bụrụ na ịchọrọ iweghachi ụfọdụ data site na ndabere iCloud ma ọ bụ iTunes, ị ga-eji mmemme a. Nwere ike ihuchalu gị niile iPhone data ma họrọ ndị na ị chọrọ iji naghachi. Ahụrụ m ya n'anya.
Enwere scammed site na ịzụta eBay ma echere m na onye na-ere ere agbanyụọla akaụntụ ya ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka iPhone Unlocker, agara m agbachapụ kpamkpam. Jiri ya kpọrọ ihe.
Iweghachite data iOS bụ sọftụwia kachasị mma iji weghachite iPhone Data, O nyeere m aka n'ọtụtụ nsogbu wee m ehichapụ kọntaktị m na ndudue ọtụtụ ụbọchị tupu. M gosiputara ya ndị enyi m niile na-eji iPhone.
Daalụ nke ukwuu. Ọ rụụrụ m iPad mebiri emebi. Agbalịrị m ọtụtụ ụzọ na-anaghị arụ ọrụ ma nke a. Ọ fọrọ nke nta ka m nyefee ya na ekele maka mmemme chi a. Daalụ ọzọ.
Nke a data mgbake ngwá ọrụ bụ otu nke kasị mma m gbalịrị otú anya. Ọbụna m na-ehichapụ ụfọdụ ndetu na enweghị nkwado ndabere faịlụ, ọ nwekwara ike i scanomi ma weghachite ndetu niile ehichapụ nke ehichapụla kemgbe afọ atọ! Nke ahụ dị ịtụnanya!
OMG. Ana m ekele gị nke ukwuu, ị na-echekwa onyinye nwanne m nwanyị nke obere bụ Christmas n'ihi na ọ chefuru paswọọdụ ya ma ugbu a, iPad ya alọghachila. Ọ na-arụ ọrụ. Ọ na-ewe oge mana ọ na-arụ ọrụ zuru oke ... !!!
Gbawara ihuenyo m na nri abalị nri. Mgbe m doziri ya, ekwentị ahụ kwụ ọtọ nwere nkwarụ. M ga-eji iPhone Unlocker iji nweta ya agbachi. M kpọrọ asị Thanksgiving ugbu a ma n'anya ngwá ọrụ a.
Ezigbo ngwa! Ọsọ dị oke ọsọ na njikọ ahụ dị ezigbo ike. Jiri ngwaahịa ndị ọzọ ma nwee njikọ ejighị n'aka. Ugbu a, m na-eji pro mbipute a echoshare omume nyefee a otutu m iPhone na PC ọtụtụ ụbọchị.
Mee na nke a maka awa 8 gara aga na-anwa izipu faịlụ ahụ n'ofe. N'ikpeazụ, achọtara m ngwá ọrụ na-enyere aka n'ezie iji nweta faịlụ m iPhone. Daalụ.
Lifehack, isi iyi maka ndụmọdụ iji nyere aka melite akụkụ niile nke ndụ anyị.
PCWorld, saịtị nyocha nke na-eduga maka laptọọpụ, mbadamba, iPads, PC nke desktọọpụ, ndị na-ebi akwụkwọ.
CNET, saịtị na-achọpụta ihe ọhụụ nke teknụzụ ndị ahịa ọhụụ.
Softonic bụ ebe ị ga-achọpụta ngwa kachasị mma maka ngwaọrụ gị.
Ọtụtụ geeks na-atụ aro iOS Data Iweghachite dị ka mgbake data kachasị bara uru na Geek Circle gburugburu ụwa.
Download Ugbu a Download Ugbu a Download Ugbu a Download Ugbu a Nweta nnwale efu site na Email maka nbudata na kọmputa